လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲသူတွေကြားမှာ အရမ်းဟော့နေတဲ့ Snapchat ရဲ့ filter အသစ်စက်စက် – For her myanmar
Posted on May 15, 2019 May 15, 2019 Author Stella	Comment(0)
သူငယ်ချင်းတွေပါလိုက်စမ်းပြီး ခွီလိုက်ရတာဆိုတာ 😂
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲသူတွေကြားမှာ အသည်းအသန်ဟော့နေတဲ့ filter အသစ်ကို Snapchat က မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ ဘာ filter လဲဆိုတော့ အမျိုးသားတွေကို မိန်းမချောတစ်ယောက်ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းသွားစေပြီး အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ ယောကျာ်းရင့်မာကြီးတစ်ယောက်ပုံစံပြောင်းသွားစေတဲ့ filter ပါ။ အရမ်းကို သေသပ်ပြီး တကယ်ကို gender ပြောင်းသွားသလိုရုပ်ထွက်တာကြောင့် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဒါနဲ့မှ ဆယ်ဖီလ်မဆွဲဖူးရင် ခေတ်မမီတော့လောက်အောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘယ်လောက်ထိ ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာတော့ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ။
အယ်မလေး … ချောတာများ ကိုယ်တွေထက်တောင် ရုပ်ထွက်ကောင်းသေးတယ် :’)
ဒီမုတ်ဆိတ်မွေး ပါးသိုင်းမွေးတွေနဲ့လူကြီးကို နုနုထွတ်ထွတ်လေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတောင် ပြောင်းလိုက်လဲ မေး …
Related article >>> ၂၀၁၉ မှာတစ်ပတ်ပြန်လည်ပြန်လာမယ့် ၉၀ ခုနှစ်က မိတ်ကပ် trend (၆) မျိုး
ကိုယ်တစ်ပိုင်းသာ ပါမနေရင် တရုတ်မချောချောလေးလို့ပဲ ထင်နေမှာ ဘုရားစူး
တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ တကယ်ကြီးကို ရုပ်ပြောင်းသွားတာ ဟုတ် ? Stella ကတော့ စမ်းကြည့်ပြီး ဝါးလုံးကွဲရယ်ပြီးပြီ။ ယောင်းတို့ကော ? စမ်းကြည့်ပြီးရင် ကောမန့်ပေးခဲ့ဖို့လည်း မမေ့နဲ့ဦးနော်။
သူငယျခငျြးတှပေါလိုကျစမျးပွီး ခှီလိုကျရတာဆိုတာ 😂
အခုရကျပိုငျးအတှငျး လူမှုကှနျရကျသုံးစှဲသူတှကွေားမှာ အသညျးအသနျဟော့နတေဲ့ filter အသဈကို Snapchat က မိတျဆကျလိုကျပါပွီ။ ဘာ filter လဲဆိုတော့ အမြိုးသားတှကေို မိနျးမခြောတဈယောကျပုံစံအဖွဈပွောငျးသှားစပွေီး အမြိုးသမီးတှကေိုတော့ ယောကျြားရငျ့မာကွီးတဈယောကျပုံစံပွောငျးသှားစတေဲ့ filter ပါ။ အရမျးကို သသေပျပွီး တကယျကို gender ပွောငျးသှားသလိုရုပျထှကျတာကွောငျ့ လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ဒါနဲ့မှ ဆယျဖီလျမဆှဲဖူးရငျ ခတျေမမီတော့လောကျအောငျ ဖွဈနပေါပွီ။ ဘယျလောကျထိ ပွောငျးလဲသှားလဲဆိုတာတော့ အောကျမှာကွညျ့လိုကျပါ။
အယျမလေး … ခြောတာမြား ကိုယျတှထေကျတောငျ ရုပျထှကျကောငျးသေးတယျ :’)
ဒီမုတျဆိတျမှေး ပါးသိုငျးမှေးတှနေဲ့လူကွီးကို နုနုထှတျထှတျလေးဖွဈအောငျ ဘယျလိုတောငျ ပွောငျးလိုကျလဲ မေး …
Related article >>> ၂၀၁၉ မှာတဈပတျပွနျလညျပွနျလာမယျ့ ၉၀ ခုနှဈက မိတျကပျ trend (၆) မြိုး
ကိုယျတဈပိုငျးသာ ပါမနရေငျ တရုတျမခြောခြောလေးလို့ပဲ ထငျနမှော ဘုရားစူး
တှတေဲ့အတိုငျးပဲ တကယျကွီးကို ရုပျပွောငျးသှားတာ ဟုတျ ? Stella ကတော့ စမျးကွညျ့ပွီး ဝါးလုံးကှဲရယျပွီးပွီ။ ယောငျးတို့ကော ? စမျးကွညျ့ပွီးရငျ ကောမနျ့ပေးခဲ့ဖို့လညျး မမနေဲ့ဦးနျော။
Tagged Entertainment, filter, Fun, Photo, Selfie, snapchat
တတိယမြောက် ကလေးလေးကို မွေးဖွားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Kate နဲ့ William
Posted on April 25, 2018 July 25, 2018 Author Sugar Cane
အမေနဲ့များတူလေမလား? အဖေနဲ့များ တူလေမလား?
Posted on April 19, 2018 July 25, 2018 Author Sugar Cane
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတကတော်လဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် သမ္မတ George Bush ရဲ့မိခင်လည်း ဖြစ်ခဲ့သူ Barbra Bush တစ်ယောက်အကြောင်း တစေ့တစောင်း